Taayyee danda’an Gocha BEENISHANGUL sana akka ofii raawwataa jiran maxxansa isaanii hardhaa keeysatti ifaan lafa kaayanii jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTaayyee danda’an Gocha BEENISHANGUL sana akka ofii raawwataa jiran maxxansa isaanii hardhaa keeysatti ifaan lafa kaayanii jiru.
Taayyee danda’an Gocha BEENISHANGUL sana akka ofii raawwataa jiran maxxansa isaanii hardhaa keeysatti ifaan lafa kaayanii jiru.
Taayyee danda’an . Gocha BEENISHANGUL sana akka ofii raawwataa jiran maxxansa isaanii hardhaa keeysatti ifaan lafa kaayanii jiru.
Siyaasa dulloomaa ABO fi WBO xurreesuuf lubbuu ilmaan oromoottiin tabachuu keesan ammalee hin dhiifnee…?
Hirira guddaan hara’a #Yuunivarsiitii_Amboo kampasii wollisootti geggefamaa ooleen dhadhannoo gurgudda armaan gadiitu godhamaa ture.
1 Ajjechaan ummatta keenya naannoo Daanga beenishangul gumuz irraa haa dhabbatu.
2 Duullii WBO irraatti banamu, motummaan kan Adeemsifama jiru haa dhabbatuu.
3 #WBO Hikkachiisuuf fakkeessanii uummata nagaa adamsanii ajjeesuun hadhaabbatu.
4 WBO gaachana ummata Oromooti.
5 WBO kan keenyaa.
6 ODP keessaa kanneen holola nurratti oofaa jiran akka milkeessa, Tayye fi Addisuu ni balalleffanna.
Dubbin Aanaa Gidaami kun dubbii Moyaalee irraa adda miti, maliif jennan Oromiyaan kallattin biyyoota hollaa wajjin kan wal qunaamu dandeessu karaa kana laman qofaani. Akka ragaan CSA agarsisuutti Aanaan Gidaami bal’ina naanno km30 ta’un Sudaan kibbaa waliin wal dangeessuu.
karra bahinsaa akka nutti hin cufnee of egannoo guddaa barbachisa jechuufan!!
Qe’ee habashaan (G-7) akka fedhe keessa socho’u keessatti ABO sochii dhorkuun salphinadha.
Godina Baalee aanota hedduu keessatti ABOn sochii taasiseen milkii guddaa argateera. Garuu magaalaa Roobee keessatti marroo lammaffaaf bulchiinsi magaalaa Roobee abbaa irrummaa agarsiiseen sochii dhorkameera. Marroo duraa utuu uummanni gadduu, utuu uummanni boo’uu nageenyaaf dursa kennuudhaan jilli ABO qophii magaalaa Roobeefi Goobbaatti qabu dabarse. Qophii guddaadhaan kan uummanni eegaa turellee qaama bulchiinsaadhaan fashalee hafe. Yeroo sana uummanni akka malee rifate. Ammas yeroo lammaffaa utuu uummanni qophii guddaadhaan jila ABO kana eeguu shira bulchiinsi magaalaa, qaamni nageenyaafi gareen muraasni xaxaniin sagantaan kun haqame. Namni tokko ykn lama kan ergama fudhatee gocha kana raawwatu uummata magaalaa Roobeefi Goobbaa bakka hin bu’u!
Gareen ABO irratti duultan kun isa magaalaa Roobeefi Goobba mandheeffatee Oromummaa balleessuu irratti hojjetaa jiru irratti duulaa!
Akkasiti Garbummaa Dina #Gibnot_7 Jalatti du’utu!
Ka’ii Qeerroo Roobee fi Goobaa!!!
Maqaan Baalee nam tokkoo lamaan babbade!
Akkuma kalee galgala Oduu fiegaatuu Roobee Baalee irraa jedhee isiniif maxxanse, ammas kunoo Ummata Oromoo bal’aa Magaalaa Roobee Istaadiyeemii Madda Walaabuutti bahe namoonni maqaan isaanii Haaji Aloo, Ibraahimii fi Gazzaalii jedhan konkolaataa lakkoofsi taargaa isii armaan gaditti mul’atu kanaan dhaqanii poolisoota waliin mooraa Istaadiyeemii marsanii ummata ABO simannaaf dhufe ari’aa jiru. Kun salphina ! Ummata keenyaa Baaleetiif salphinna guddaa dha. Kana duwwaa miti Artiatoonni Oromoo hedduun kan Ilfinesh Qannoo keessatti argaman daandii dheeraa qaxaamuruun Roobe dhaqanii osoo hin milkaayin hafaniiru. Ilfinesh Qannoo Artistiin ummata Oromoof jecha Rifeensa ishii gogeessa Qaruuraan haadamte umata Baalee duuteef, gidhamteef, tumamteef, salphattee hadhallee jireenya namaa gadii jiraattuuf biraa kabajaa dhabdee marsaa lammaffaaf biratti salphattee jirti. Kun ummata Oromoo hunda biratti gara nyaattoo ta’uu qaba!
#Yakka_Waraanaa Lixa Oromiyaa Wallagga bahaatti lola uummata keenyarratti hidhattoota Gumuuziin baname gaggeeffama jiru balaaleffachuufi Sagalee uummataa Keenyaaf ta’uuf Qeerroon Barattootni Oromoo #Yuunibarsiitii_Jimmaa hiriira mormii gaggeessa jiru .
Yakki waraanaa hidhattoota Gumuuziin uummata nagaa qe’ee isaa irraa jiraaturratti xiyyeeffateefi yakki ulfaataan xiyya waraanaa fayyadamuun itti fufinsaan gaggeeffama jira. Haala kanaan Uummatni Oromoo Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa lubbuun wareegamaa, qabeenyi mana galmaa jiraatoota kan barbadaa’aafi uummatni jumlaan qe’ee isaarraa buqqa’uun mirkanaa’eera. Yakka ulfaataa uummata keenya kallattii maraan mudachaa jiru kanaaf sadarkaa duraatti kan uummata ittisuu qabu Mootummaadha. Mootummaan uummata Ittisuu dadhabuun kun Oromiyaa keessatti haala jiru hammeessaa jira.
Kanuma sababeeffachuun uummata keenya qe’eef qabeenyaa isaa irratti lolli qaamoota Gumuuz irraa hidhataniin gaggeeffamaa jiruuf sagalee ta’uu qabna jechuun Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa hiriira gaggeessuun ajjechaan, qe’eerraa buqqisuuniifi Yakki Waraanaa Uummata keenyarratti gaggeeffama jiru atattaman haa dhaabatu jechuun sagalee mormii dhageesisa jiru. Yakki ulfaataan kun dirmannaa mootummaafi uummata Oromoo hundaa, akkasumas jarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundaa kan barbaadudha!!
Imaammata barnootaa haaraa irratti marii addaa Hayyoota waliin taasifame OBN 24 02 2011